के हो दादुरा–रुबेला रोग? :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
के हो दादुरा–रुबेला रोग?
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, फागुन २
मिजल्स भाइरसका कारण हुने दादुरा छिट्टै सर्ने संक्रामक रोग हो। रुबेला भाइरसका कारण हुने दादुरा जस्तै देखिने अर्को संक्रामक रोग हो रुबेला।
चाडै महामारीको रुप लिनसक्ने यी रोगहरु विशेषगरी ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई धेरै हुने शुक्रराज ट्रपिकल सेन्टर तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुका रिसर्च संयोजक डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन्।
दादुरा संक्रमण भएमा मृत्यु समेत हुनसक्छ। त्यसैगरी, रुबेला भाइरस दादुरा रोगको लक्षण भन्दा सामान्य किसिमको हुन्छ।तर, गर्भावस्थामा रुबेला संक्रमण भएमा विभिन्न जटिलताहरु देखिने डा.पुन बताउँछन्। जस्तैः समय नपुगी बच्चा जन्मने, मृत बच्चा जन्मिने तथा गम्भीर प्रकारको जन्मजात हुने विकलांगहरू देखा पर्नसक्ने, गर्भपतन हुने।
डा. पुनकाअनुसार यस्तो रोग लागेमा अरुलाई सर्नबाट जोगाउन बिरामीलाई अलग ठाउँमा राख्न आवश्यक हुन्छ। यससँगै चिकित्समको सल्लाहमा लक्षणअनुसार तत्काल उपचार गरिहाल्नुपर्छ।
कसरी सर्छ दादुरा
दादुरा रोग संक्रमित व्यक्तिको नाक तथा घाँटीबाट निस्किने तरल पदार्थको सम्पर्कमा आँउदा, हाच्छ्यूँ गर्दा, र खोक्दा विषाणु हावामा फैलिएर सर्छ।
दादुरा रोगको लक्षण देखिनु भन्दा अघि तथा लक्षण देखिइसकेपछि पनि धेरै दिनसम्म संक्रमितले दादुराका विषाणु सार्दछन्। बालबालिकाहरू समूहमा जम्मा हुने या भिड हुने स्थानहरूमा सजिलैसँग एकअर्कामा सर्नसक्छ।
कस्ता हुन्छन् लक्षण
दादुरा रोगको पहिलो लक्षण उच्च ज्वरो आउनु हो। संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्क भएको १०–१२ दिनपछि ज्वरो आउँछ। यो समयमा रोगीको नाकबाट पानी बग्ने, खोकी लाग्ने, आखाँ रातो हुने वा आँशु बग्ने र रोगीको गालाको भित्रीभागमा मसिना सेतो दाग देखापर्छ।
यससँगै केही दिनपछि मुख तथा माथिल्लो गर्दनको भागमा केही उठेका विमिरा देखापर्छन्। ती विमिरा करिव ३ दिनभित्र छाती, पेट, हात तथा खुट्टामा फैलिन्छन्।
यी विमिरा ५, ६ दिनसम्म रहिरहन्छन् र त्यसपछि क्रमशः हराएर जान्छन्। सामान्यतया उक्त रोगको जिवाणु शरीरमा प्रवेश गरेको ७ देखि १८ दिनभित्रमा लक्षण देखिन थाल्छ।
बिहीबारबाट राष्ट्रिय दादुरा–रुबेला खोप अभियान सुरु भएको छ। फागुन १ बाट सुरु भएको पहिलो चरणको अभियान ३० गतेसम्म लागू हुनेछ।
यो अभियान १, २ र ५ नं. प्रदेशका ३५ जिल्लामा संचालन हुने भएको हो। दादुरा–रुबेलाबाट बढी प्रभावित रहेका यी प्रदेशका १८ लाख बढी बालबालिकालाई दादुरा–रुबेला खोप दिइने सरकारको लक्ष्य छ। उक्त खोपको दोस्रो चरण चैतबाट सुरु हुनेछ।
२०२३ सम्म दादुरा–रुबेला रोग निवारण गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘पूर्ण खोपः सुरक्षित भविष्य’ भन्ने नारासहित राष्ट्रव्यापी रुपमा यो अभियान सुरु गरेको हो। सरकारी तथ्याकंअनुसार नेपालमा पूर्ण खोप नलगाउने २१ प्रतिशत छन्।
दादुरा–रुबेला विरुद्धको खोप बच्चा जन्मिएको ९ र १५ महिनापछि लगाउनुपर्छ। बालबालिकालाइ सो समयमा दादुरा–रुबेलाको गुणस्तरीय खोप दुई मात्रा दिएमा पूर्णरुपमा नियन्त्रण र निवारण गर्न सकिने चिकित्सकहरु बताउँछन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २, २०७६, १५:१२:००
यसरी हुन्छ छालामा दाद संक्रमण, कसरी बच्ने?
कसरी हटाउने शरीरका अनावश्यक रौं?
पेटको दाहिने भाग पटक–पटक दुख्नु एपेन्डिसाइटिसको संकेत
कोरोना भाइरस संक्रमित ४ हजार ७ सय ४० उपचारपछि डिस्चार्ज
त्रिवि शिक्षण अस्पताल मिर्गौला प्रत्यारोपणमा ९८ प्रतिशत सफल